सामान्य नियम र खरीद को शर्तहरु: B2B - Law & More B.V.
ब्लग » सामान्य नियम र खरीद को शर्तहरु: B2B
सामान्य नियम र खरीद को शर्तहरु: B2B
एक उद्यमी को रूप मा तपाइँ एक नियमित आधार मा सम्झौता मा प्रवेश गर्नुहोस्। साथै अन्य कम्पनीहरु संग। सामान्य नियम र सर्तहरु प्राय सम्झौताको हिस्सा हुन्। सामान्य नियम र सर्तहरु विनियमित (कानूनी) विषयहरु कि प्रत्येक सम्झौता मा महत्वपूर्ण छन्, जस्तै भुक्तानी शर्तहरु र देनदारिहरु। यदि, एक उद्यमी को रूप मा, तपाइँ सामान र/वा सेवाहरु किन्नुहुन्छ, तपाइँ पनि सामान्य खरिद सर्तहरु को एक सेट हुन सक्छ। यदि तपाइँ यी छैन, तपाइँ तिनीहरूलाई चित्र को लागी सोच्न सक्नुहुन्छ। बाट एक वकील Law & More यो संग तपाइँलाई मद्दत गर्न खुसी हुनेछ। यो ब्लग सामान्य नियम र खरीद को शर्तहरु को सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्षहरु मा छलफल र विशिष्ट क्षेत्रहरु को लागी केहि शर्तहरु लाई हाइलाइट गर्दछ। हाम्रो ब्लग मा 'सामान्य नियम र सर्तहरु: के तपाइँ उनीहरु को बारे मा जान्नु पर्छ' तपाइँ सामान्य नियम र सर्तहरु र उपभोक्ताहरु वा उपभोक्ताहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्ने कम्पनीहरु को लागी ब्याज को हो कि जानकारी को बारे मा अधिक सामान्य जानकारी पढ्न सक्नुहुन्छ।
सामान्य नियम र सर्तहरु के हुन्?
सामान्य नियम र सर्तहरु मा प्रायः मानक शर्तहरु छन् कि प्रत्येक अनुबंध को लागी फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनुबन्धमा नै दलहरु सहमत छन् कि उनीहरु एक अर्का बाट के ठ्याक्कै मान्छन्: कोर सम्झौताहरु। प्रत्येक सम्झौता फरक छ। सामान्य सर्तहरु पूर्व शर्तहरु राख्छन्। सामान्य नियम र सर्तहरु लाई बारम्बार प्रयोग गर्न को लागी इरादा गरीएको छ। तपाइँ उनीहरुलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ यदि तपाइँ नियमित रूपमा एकै प्रकारको सम्झौता मा प्रवेश गर्नुहुन्छ वा त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य नियम र सर्तहरु यो धेरै धेरै नयाँ अनुबंध मा प्रवेश गर्न को लागी बनाउन को लागी, (मानक) विषयहरु को एक संख्या प्रत्येक पटक राखिएको छैन। खरिद सर्तहरु शर्तहरु हुन् कि सामान र सेवाहरु को खरीद मा लागू हुन्छ। यो एक धेरै व्यापक अवधारणा हो। खरीद शर्तहरु यस प्रकार निर्माण उद्योग, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र र अन्य सेवा क्षेत्रहरु को रूप मा क्षेत्रहरु को सबै प्रकार मा पाउन सकिन्छ। यदि तपाइँ खुद्रा बजार मा सक्रिय हुनुहुन्छ, किन्ने दिन को आदेश हुनेछ। ब्यापार को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, उपयुक्त सामान्य नियम र सर्तहरु लाई तैयार गर्न को लागी आवश्यक छ।
सामान्य नियम र सर्तहरु को उपयोग गर्दा, दुई पक्षहरु को धेरै महत्व छ: १) जब सामान्य नियम र शर्तहरु लाई आह्वान गर्न सकिन्छ, र २) सामान्य नियम र शर्तहरु मा के गर्न र विनियमित गर्न सकिदैन?
तपाइँको आफ्नै सामान्य नियम र शर्तहरु लाई आह्वान गर्दै
आपूर्तिकर्ता संग एक संघर्ष को घटना मा, तपाइँ तपाइँको सामान्य खरीद शर्तहरु मा भरोसा गर्न चाहानुहुन्छ। चाहे तपाइँ वास्तव मा उनीहरु मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ पहलुहरु को एक संख्या मा निर्भर गर्दछ। सबै भन्दा पहिले, सामान्य नियम र शर्तहरु लागू घोषित हुनु पर्छ। तपाइँ तिनीहरूलाई कसरी लागू घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? उद्धरण, आदेश वा खरिद आदेश को लागी अनुरोध मा बताएर वा सम्झौता मा तपाइँ तपाइँको सामान्य खरीद शर्तहरु सम्झौताको लागी घोषित घोषणा गरीरहनुभएको छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ निम्न वाक्य समावेश गर्न सक्नुहुन्छ: '[कम्पनीको नाम] को सामान्य खरीद शर्तहरु हाम्रा सबै सम्झौताहरुमा लागू हुन्छ'। यदि तपाइँ विभिन्न प्रकारका खरिदहरु संग व्यवहार गर्नुहुन्छ, उदाहरण को लागी दुबै सामानहरु को खरीद र काम को अनुबंध, र तपाइँ बिभिन्न सामान्य शर्तहरु संग काम गर्नुहुन्छ, तपाइँ पनि स्पष्ट रूप मा संकेत गर्न को लागी शर्तहरु को सेट तपाइँ लागू हुने घोषणा गर्नुहुन्छ।
दोस्रो, तपाइँको सामान्य खरीद शर्तहरु तपाइँको ट्रेडिंग पार्टी द्वारा स्वीकार गरिनु पर्छ। आदर्श स्थिति यो हो कि यो लिखित गरीएको छ, तर यो शर्तहरु लागू हुन को लागी आवश्यक छैन। सर्तहरु पनि tacitly स्वीकार गर्न सकिन्छ, उदाहरण को लागी, किनभने आपूर्तिकर्ता तपाइँको सामान्य खरिद शर्तहरु को लागी लागू हुने घोषणा को बिरोध गरेको छैन र पछि तपाइँ संग सम्झौता मा प्रवेश गर्दछ।
अन्तमा, सामान्य खरीद शर्तहरु को प्रयोगकर्ता, अर्थात् तपाइँ क्रेता को रूप मा, एक जानकारी कर्तव्य छ (धारा 6: 233 डच नागरिक संहिता को बी अन्तर्गत)। यो दायित्व पूरा हुन्छ यदि सामान्य खरिद शर्तहरु पहिले वा सम्झौता को समापन मा आपूर्तिकर्ता लाई हस्तान्तरण गरीएको छ। यदि सामान्य खरीद शर्तहरु लाई हस्तान्तरण गर्नु अघि वा अनुबंध को समापन को समय मा छ तर्कसंगत रूपमा सम्भव छैन, जानकारी प्रदान गर्ने दायित्व अर्को तरीकाले पूरा गर्न सकिन्छ। त्यस अवस्थामा यो भन्न को लागी पर्याप्त हुनेछ कि सर्तहरु प्रयोगकर्ता को कार्यालय मा वा एक वाणिज्य को चेम्बर मा उनको द्वारा संकेत गरीएको छ वा कि उनीहरु एक अदालत रजिस्ट्री संग दायर गरीएको छ, र कि उनीहरुलाई अनुरोध मा पठाइनेछ। यो कथन करार को समापन भन्दा पहिले गरिनु पर्छ। तथ्य यो हो कि वितरण उचित रूप मा सम्भव छैन मात्र अपवादात्मक मामिलाहरुमा मान्न सकिन्छ।
वितरण पनि इलेक्ट्रोनिक स्थान लिन सक्छ। यस अवस्थामा, उही आवश्यकताहरु भौतिक हस्तान्तरण को लागी लागू हुन्छ। त्यस अवस्थामा, खरिद सर्तहरु पहिले वा अनुबंध को समापन को समय मा उपलब्ध गराउनु पर्छ, यस्तो तरीका बाट कि आपूर्तिकर्ता उनीहरुलाई भण्डार गर्न सक्छन् र उनीहरु भविष्य को सन्दर्भ को लागी सुलभ छन्। यदि यो हो तर्कसंगत रूपमा सम्भव छैन, आपूर्तिकर्ता लाई सम्झौताको अन्त्य हुनु भन्दा पहिले सूचित गर्नु पर्छ जहाँ सर्तहरु लाई इलेक्ट्रोनिक रुपमा परामर्श गर्न सकिन्छ र कि उनीहरुलाई इलेक्ट्रोनिक वा अन्यथा अनुरोध मा पठाइनेछ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: यदि सम्झौता इलेक्ट्रोनिक रूप मा समाप्त भएको छैन, आपूर्तिकर्ता को सहमति सामान्य खरीद शर्तहरु लाई इलेक्ट्रोनिक उपलब्ध गराउन को लागी आवश्यक छ!
यदि जानकारी प्रदान गर्ने दायित्व पूरा भएको छैन भने, तपाइँ सामान्य नियम र शर्तहरु मा एक खंड आह्वान गर्न सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ। खण्ड तब अमान्य हुन्छ। एउटा ठूलो प्रतिपक्षले जानकारी प्रदान गर्ने दायित्व को उल्ल to्घन को कारणले शून्यता को आह्वान गर्न सक्दैन। अर्को पक्ष, तथापि, व्यावहारिकता र निष्पक्षता मा भरोसा गर्न सक्छ। यसको मतलब यो हो कि अन्य पार्टीले बहस गर्न सक्छ र किन तपाइँको सामान्य खरीद शर्तहरु मा एक प्रावधान aforementioned मानक को दृश्य मा अस्वीकार्य छ।
यदि तपाइँ तपाइँको सामान्य खरिद शर्तहरु लागू घोषित गर्नुहुन्छ, यो हुन सक्छ कि आपूर्तिकर्ता तपाइँको शर्तहरु को प्रयोज्यता अस्वीकार गर्दछ र लागू हुन्छ उसको आफ्नै सामान्य वितरण शर्तहरु घोषणा गर्दछ। यो स्थितिलाई कानूनी भाषामा 'फारमको लडाई' भनिन्छ। नेदरल्याण्ड्स मा, मुख्य नियम यो हो कि सर्तहरु पहिले लागू हुन्छ। तेसैले तपाइँ यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाइँ तपाइँको सामान्य खरिद शर्तहरु लागू घोषित गर्नुहुन्छ र उनीहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो चरण मा हस्तान्तरण गर्नुहोस्। सर्तहरु लाई एक प्रस्ताव को लागी अनुरोध को समय को रूप मा चाँडै लागू घोषित गर्न सकिन्छ। यदि आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव को बखत तपाइँको शर्तहरु लाई अस्वीकार गर्दैन, तपाइँको सामान्य खरीद शर्तहरु लागू हुन्छ। यदि आपूर्तिकर्ता कोटेशन (प्रस्ताव) मा आफ्नो नियम र शर्तहरु सामेल छन् र स्पष्ट रूपले तपाइँको अस्वीकार गर्दछ र तपाइँ प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाइँ फेरि तपाइँको खरीद शर्तहरु लाई उल्लेख गर्नु पर्छ र स्पष्ट रूप बाट आपूर्तिकर्ता को ती अस्वीकार गर्नु पर्छ। यदि तपाइँ उनीहरुलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुहुन्न भने, एक सम्झौता अझै पनी स्थापित हुनेछ जसमा आपूर्तिकर्ताको सामान्य नियम र बिक्री को शर्तहरु लागू हुन्छ! यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ आपूर्तिकर्ता लाई संकेत गर्नुहुन्छ कि तपाइँ मात्र सहमत हुन चाहानुहुन्छ यदि तपाइँको सामान्य खरीद शर्तहरु लागू हुन्छ। क्रम मा छलफल को मौका कम गर्न को लागी, यो तथ्य यो हो कि सामान्य खरिद शर्तहरु सम्झौता मा नै लागू हुन्छ लाई समावेश गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ।
माथिको लागू हुन सक्दैन यदि त्यहाँ एक अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री अनुबंध छ। त्यो अवस्थामा अदालत भियना बिक्री सम्मेलन मा हेर्न को लागी हुन सक्छ। त्यो सम्मेलनमा 'नक आउट नियम' लागू हुन्छ। मुख्य नियम यो हो कि अनुबंध समाप्त भयो र नियम र सर्तहरु मा प्रावधानहरु कि अनुबंध को भाग को रूप मा सहमत छन्। दुबै सामान्य सर्तहरु को प्रावधानहरु कि संघर्ष अनुबंध को हिस्सा बन्न सक्दैनन्। तेसैले दलहरुले परस्पर विरोधी प्रावधानहरुको बारेमा व्यवस्था गर्नु पर्छ।
सम्झौता र प्रतिबन्ध को स्वतन्त्रता
करार कानून अनुबंध को स्वतन्त्रता को सिद्धान्त द्वारा शासित छ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ मात्र निर्णय गर्न को लागी स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि तपाइँ कुन आपूर्तिकर्ता संग एक सम्झौता मा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तर यो पनि के तपाइँ बिल्कुल त्यो पार्टी संग सहमत हुनुहुन्छ। जे होस्, सबै केहि सीमा बिना शर्तहरु मा राखीएको हुन सक्दैन। कानूनले यो पनि बताउँछ कि र जब सामान्य अवस्था 'अमान्य' हुन सक्छ। यस तरीकाले उपभोक्ताहरुलाई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गरिन्छ। कहिलेकाहीँ उद्यमीहरु पनि सुरक्षा नियम को आह्वान गर्न सक्छन्। यसलाई रिफ्लेक्स एक्शन भनिन्छ। यी सामान्यतया साना प्रतिपक्षी हुन्। यी, उदाहरण को लागी, प्राकृतिक व्यक्तिहरु जस्तै एक स्थानीय बेकर को रूप मा एक पेशा वा व्यापार को अभ्यास मा अभिनय गरीरहेका छन्। यो विशिष्ट परिस्थिति मा निर्भर गर्दछ कि यस्तो पार्टी सुरक्षात्मक नियमहरुमा भरोसा गर्न सक्छ। एक क्रय पार्टी को रूप मा तपाइँ यो तपाइँको सामान्य अवस्थामा खाता मा लिनु पर्दैन, किनकि अन्य पार्टी सधैं एक पार्टी हो जो उपभोक्ता संरक्षण नियमहरु लाई अपील गर्न सक्दैन। अन्य पार्टी प्राय: एक पार्टी हो कि बेचिन्छ/डेलिभर वा एक नियमित आधार मा सेवाहरु प्रदान गर्दछ। यदि तपाइँ एक 'कमजोर पार्टी' संग व्यापार गर्नुहुन्छ अलग सम्झौता गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको मानक खरीद शर्तहरु को उपयोग गर्न को लागी छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँ जोखिम चलाउनुहुन्छ कि तपाइँ सामान्य परिस्थितिहरुमा एक निश्चित खण्ड मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्न किनकि, उदाहरण को लागी, यो तपाइँको प्रतिपक्ष द्वारा रद्द गरीएको छ।
कानून मा सबै को लागी लागू हुने अनुबंध को स्वतन्त्रता मा प्रतिबन्ध छ। उदाहरण को लागी, पार्टीहरु बीच सम्झौताहरु कानून वा सार्वजनिक व्यवस्था को विपरीत हुन सक्दैन, अन्यथा ती शून्य छन्। यो दुबै अनुबंध मा व्यवस्था र सामान्य नियम र शर्तहरु मा प्रावधानहरु लाई लागू हुन्छ। यसको अतिरिक्त, शर्तहरु लाई रद्द गर्न सकिन्छ यदि उनीहरु तर्कसंगतता र निष्पक्षताको मापदण्ड अनुसार अस्वीकार्य छन्। अनुबन्ध को aforementioned स्वतन्त्रता र नियमहरु कि सम्झौताहरु प्रदर्शन गरिनु पर्छ, उपरोक्त मानक संयम संग लागू गरिनु पर्छ। यदि प्रश्न मा शब्द को आवेदन अस्वीकार्य छ, यो रद्द गर्न सकिन्छ। विशिष्ट मामला को सबै परिस्थिति मूल्यांकन मा एक भूमिका खेल्छन्।
कस्ता विषयहरु सामान्य नियम र सर्तहरु मा कभर छन्?
सामान्य नियम र शर्तहरु मा तपाइँ कुनै पनी परिस्थिति को अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ आफैं मा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि एक प्रावधान एक विशिष्ट मामला मा लागू छैन भने, पक्षहरु यो प्रावधान - र कुनै अन्य प्रावधानहरु - बहिष्कृत गरिनेछ कि सहमत हुन सक्छन्। यो सामान्य नियम र सर्तहरु भन्दा अनुबंध मा फरक वा अधिक विशिष्ट व्यवस्था गर्न को लागी पनि सम्भव छ। तल विषयहरु को एक संख्या हो जुन तपाइँको खरीद शर्तहरुमा विनियमित हुन सक्छ।
सबै भन्दा पहिले, यो सामान्य खरीद शर्तहरु मा परिभाषा को एक सूची शामिल गर्न को लागी उपयोगी छ। यो सूचीले महत्त्वपूर्ण सर्तहरु बताउँछ कि शर्तहरुमा दोहोरिन्छ।
दायित्व एक विषय हो कि ठीक संग विनियमित हुन आवश्यक छ। सिद्धान्त मा, तपाइँ उही दायित्व योजना हरेक अनुबंध मा लागू गर्न चाहानुहुन्छ। तपाइँ सकेसम्म धेरै तपाइँको आफ्नै दायित्व बहिष्कृत गर्न चाहानुहुन्छ। यसैले यो एक सामान्य खरीद शर्तहरु मा अग्रिम विनियमित गर्न को लागी एक विषय हो।
बौद्धिक सम्पत्ति मा एक प्रावधान पनि केहि सामान्य नियम र शर्तहरु मा सामेल हुनु पर्छ। यदि तपाइँ प्राय: आर्किटेक्टहरु लाई कमसेकम निर्माण चित्रहरु र/वा ठेकेदारहरु लाई केहि कामहरु प्रदान गर्न को लागी डिजाइन गर्नुहुन्छ, तपाइँ अन्तिम परिणामहरु तपाइँको सम्पत्ति हुन चाहानुहुन्छ। सिद्धान्त मा, एक वास्तुकार, निर्माता को रूप मा, चित्र को प्रतिलिपि अधिकार छ। सामान्य अवस्थामा, उदाहरण को लागी, यो निर्धारित गर्न सकिन्छ कि वास्तुकार स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
जब अन्य पार्टी संग वा जब एक वास्तविक खरीद, (व्यापार) संवेदनशील जानकारी बनाउन को लागी कुराकानी गरीरहेछ साझा जानकारी। यसैले यो महत्वपूर्ण छ कि सामान्य नियम र शर्तहरु मा एक प्रावधान जो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको प्रतिपक्ष गोप्य जानकारी को उपयोग गर्न सक्नुहुन्न (जस्तै)।
यदि तपाइँ उत्पादनहरु किन्नुहुन्छ वा सेवाहरु प्रदान गर्न को लागी एक पार्टी आयोग, तपाइँ स्वाभाविक रूप मा चाहानुहुन्छ कि अन्य पार्टी निश्चित योग्यता वा परिणाम को ग्यारेन्टी गर्न को लागी।
लागू कानून र सक्षम न्यायाधीश
यदि तपाइँको करार पार्टी नेदरल्याण्ड मा स्थित छ र सामान र सेवाहरु को वितरण पनि नेदरल्याण्ड मा हुन्छ, अनुबंध मा लागू कानून मा एक प्रावधान कम महत्वपूर्ण लाग्न सक्छ। जे होस्, क्रम मा अप्रत्याशित परिस्थितिहरु लाई रोक्न को लागी, यो एक राम्रो विचार हो सधैं तपाइँको सामान्य नियम र सर्तहरु मा जो कानून तपाइँ लागू हुने घोषणा गरीरहनुभएको छ। यसको अतिरिक्त, तपाइँ सामान्य नियम र शर्तहरु मा संकेत गर्न सक्नुहुन्छ जुन अदालतमा कुनै विवाद पेश गर्नु पर्छ।
माथिको सूची पूर्ण छैन। त्यहाँ पक्कै धेरै धेरै विषयहरु छन् कि सामान्य नियम र शर्तहरु मा विनियमित गर्न सकिन्छ। यो पनि कम्पनी को प्रकार र क्षेत्र मा यो संचालित मा निर्भर गर्दछ। दृष्टान्त को माध्यम बाट, हामी काम को लागी अनुबंध को घटना मा सामान्य खरीद शर्तहरु को लागी रोचक छन् कि विषयहरु को उदाहरण को एक संख्या मा जानेछौं।
यदि तपाइँ एक प्रिन्सिपल वा ठेकेदार को रूप मा एक (उप) ठेकेदार एक भौतिक काम गर्न को लागी संलग्न हुनुहुन्छ, तब तपाइँ चेन दायित्व को नियमन अन्तर्गत पर्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ तपाइँको (उप) ठेकेदार द्वारा पेरोल करहरु को भुक्तानी को लागी उत्तरदायी हुनुहुन्छ। पेरोल कर र सामाजिक सुरक्षा योगदान पेरोल कर र सामाजिक सुरक्षा योगदान को रूप मा परिभाषित गरीएको छ। यदि तपाइँको ठेकेदार वा उप ठेकेदार भुक्तानी दायित्वहरु संग अनुपालन गर्दैन, कर र भन्सार प्रशासन तपाइँलाई उत्तरदायी धारण गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भव भएसम्म दायित्व बाट बच्न र जोखिम कम गर्न को लागी, तपाइँ तपाइँको (उप) ठेकेदार संग केहि सम्झौताहरु गर्नु पर्छ। यी सामान्य नियम र शर्तहरु मा राखीएको हुन सक्छ।
उदाहरण को लागी, एक प्रधानाध्यापक को रूप मा तपाइँ तपाइँको ठेकेदार संग सहमत हुन सक्नुहुन्छ कि उसले काम शुरू गर्नु भन्दा पहिले उसले साइट मा स्थितिको छानबिन गर्नेछ र तब तपाइँलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् यदि त्यहाँ असाइनमेन्टमा कुनै त्रुटि छ। यो ठेकेदार लाई अन्धा बाट काम गर्न बाट रोक्न को लागी सहमत भएको छ र ठेकेदार लाई तपाइँ संगै सोच्न बाध्य गर्दछ। यस तरीकाले, कुनै पनि क्षति रोक्न सकिन्छ।
सुरक्षा कारणहरु को लागी, तपाइँ ठेकेदार र ठेकेदार को स्टाफ को गुणहरु मा आवश्यकताहरु लागू गर्न चाहानुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ VCA प्रमाणीकरण को आवश्यकता हुन सक्छ। यो पूर्व eminently सामान्य नियम र शर्तहरु संग व्यवहार गर्न को लागी एक विषय हो।
एक उद्यमी को रूप मा तपाइँ अन्य पार्टी संग सम्बन्ध को लागी काम र प्राविधिक स्थापना कार्य 2012 को कार्यान्वयन को लागी समान प्रशासनिक नियम र शर्तहरु घोषणा गर्न चाहानुहुन्छ। त्यस अवस्थामा यो सामान्य खरीद शर्तहरुमा उनीहरुलाई लागू घोषित गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। यसको अतिरिक्त, UAV 2012 बाट कुनै पनि विचलन पनि स्पष्ट रूप बाट संकेत गरीएको हुनुपर्छ।
यो Law & More वकीलहरु दुबै खरीददारहरु र आपूर्तिकर्ताहरु लाई सहयोग गर्छन्। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि सामान्य नियम र शर्तहरु के हो? बाट वकिलहरु Law & More यस मा सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरु तपाइँ को लागी सामान्य नियम र सर्तहरु को लागी आकर्षित गर्न वा अवस्थित को आकलन गर्न सक्छन्।
अघिल्लो पोस्ट मान्यता र नेदरल्याण्ड मा विदेशी निर्णय को प्रवर्तन
अर्को पोस्ट दिवालियापन ऐन र यसको प्रक्रियाहरु